အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ လယ်ယာမဟုတ်သောစီးပွားရေး ကဏ္ဍ၏ လစဉ်အပြောင်းအလဲဒေတာ
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ လယ်ယာမဟုတ်သောစီးပွားရေး ကဏ္ဍ၏ လစဉ်အပြောင်းအလဲဒေတာကို 15:30နာရီ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.
ထိုဒေတာသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘီလျံနဲ့ချီသောအရောင်းအဝယ်သမားက လစဉ်လတိုင်းစောင့်ကြည့်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ထိုဒေတာသည် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းတွင် အလုပ်အကိုင်မည်မျှခန့်ထားနိုင်ခဲ့သည်ဆိုတာကို ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.အမေရိကန်အလုပ်သမားရေးရာဌာနကနေပြီး အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခလစာရရှိမှုအခြေအနေများကိုလဲ ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်. ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့်လည်း ငွေကြေးမူဝါဒတွေပြောင်းလဲရန် အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရန် ယခုစီးပွားရေးဒေတာအခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိပါသည်.ထို့်ကြောင့် ယခုဒေတာသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးနှင့် အခြားငွေကြေးအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုပြင်းသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ဒီနှစ်ဘယ်အချိန်လောက်မှာ ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းတင်မလဲဆိုတာကို ဈေးကွက်ကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်. ဘယ်အချိန်လောက်မှာ ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းတင်မယ်ဆိုတာ အမေရိကအလုပ်သမားဈေးကွက်အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်. ယခင်NFP အလုပ်သမားများ၏လုပ်ခလစာပေးချေမှုအခြေအနေ ဒေတာအရ ဈေးကွက်က 170Kအထိမျှော်လင့်ထားပေမယ့် ဈေးကွက်ခန့်မှန်းထားတဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်ကောင်းမွန်ပြီး 227Kအထိရှိခဲ့ပါတယ်. သို့ပါသော်လည်း အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းနဲ့ ဝင်ငွေအခြေအနေကနေကောင်းမွန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး.